Zita rechiHebheru rokuti Bheteri, rinoreva “Imba yaMwari.” (Genesisi 28:17, 19) Izita rakakodzera zvivako zvakavakwa neZvapupu zvaJehovha mupasi rose, uye basa rokuparidza rinotungamirirwa nokutsigirwa pazvivako izvi. Dare Rinotungamirira rinoshumira riri pamuzinda wenyika yose kuNew York State, U.S.A., uye riri ikoko rinotarisira basa rinoitwa pamahofisi ebazi munyika dzakawanda. Seboka, vaya vanoshanda pazvivako izvi vanozivikanwa semhuri yeBheteri. Vanogara uye vanoshanda pamwe chete, vanodya pamwe chete uye vanodzidza Bhaibheri pamwe chete vakabatana semhuri.—Pisarema 133:1.
Inzvimbo yakasiyana nedzimwe panoshanda vanhu vanozvipira. Pazvivako zvose zveBheteri pane varume nevakadzi vechiKristu vanozvipira nguva yakazara kuita kuda kwaMwari uye kuita mabasa ane chokuita noUmambo. (Mateu 6:33) Hapana anopiwa peyi, asi vose vanopiwa pokugara nezvokudya uye mari shomanana yokuti vabatsirike. Munhu wose ari paBheteri ane basa raanoita, mungava muhofisi, mukicheni kana kuti muimba yokudyira. Vamwe vanoshanda munzvimbo yokudhindira kana kuti yokubatanidzira mabhuku, vamwe vanochenesa dzimba, kuwacha mbatya, kuita kuti zvinhu zvigare zvakanaka kana kuitawo zvimwe zvinhu.
Inzvimbo ine vanhu vanoshanda zvikuru pakutsigira kuparidzwa kwoUmambo. Chinangwa chikuru chemusha mumwe nomumwe weBheteri ndechokuita kuti vanhu vakawanda sezvinobvira vawane chokwadi cheBhaibheri. Mumwe muenzaniso wacho ibhurocha rino. Dare Rinotungamirira rakatarisira kunyorwa kwebhurocha iri, rikatumirwa nekombiyuta kumazana emapoka evashanduri pasi pose, rikadhindwa pachishandiswa michina inokurumidza zvikuru iri panzvimbo dzokudhindira pamisha yeBheteri yakawanda ndokutumirwa kuungano dzinopfuura 110 000. Panoitwa matanho ose aya, mhuri dzeBheteri dzinotsigira basa rinofanira kuitwa nokukurumidza pane ose, rokuparidza mashoko akanaka.—Mako 13:10.
Ndivanaani vanoshanda paBheteri uye vanotarisirwa sei?
Ibasa ripi rinofanira kukurumidza kuitwa rinotsigirwa nezvinoitwa pamusha mumwe nomumwe weBheteri?
Vhidhiyo Pfupi: Mushandirapamwe Wokuparidza Pasi Rose Unoitwa neZvapupu zvaJehovha